४ महिनामा १४ किलोको भालेको इतिहास सुन्दा सबै चकित ! - Hamro Abhiyan
४ महिनामा १४ किलोको भालेको इतिहास सुन्दा सबै चकित !
बागलुङ। उमेर चार महिना। भारी जीउ। हाँसको झैँ चाल। भुइँमा थ’चक्क बसेपछि झ’ट्टै उठ्दैन। सुस्तरी खोर चाहार्छ, चारो टि’प्छ। यसरी नै एउटा ‘ब्रोइलर’ कुखुराको भालेले आफ्ना आखिरी दिन का’टिरहेको छ।
नाफा घा’टा हेर्दा बुढोहुञ्जेल कुखुरा पाल्नु व्यावसायिक हितमा नभए पनि परीक्षणले नयाँ सिकाइ भएको कुखुरापालक शर्माको भनाइ छ। २५ दिन काटेपछि ‘ब्रोइलर’ कुखुराको तौल दैनिक ५० ग्रामका दरले बढ्ने गर्छ। ४५ देखि ६० दिनभित्र कुखुरा बेच्नयोग्य हुन्छ। ‘ब्रोइलर’ कुखुराको आयु छदेखि आठ महिनासम्म हुने बताइन्छ।